यौन शक्ती बढाउने ५ खानेकुरा « Mero LifeStyle
यौन शक्ती बढाउने ५ खानेकुरा
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ केही हामीले सहजै पाउने खानेकुराहरुले यौन शक्तिलाई मजबुत बनाउँछ । त्यस्ता खानेकुराले सेक्स ड्राइभ बढाउँदै यौन जीवनलाई अझ स्वस्थ बनाउँछ । हाम्रो गाउँघरमा सहजै पाउने यी खानेकुराहरु के के हुन् त ?
स्ट्रबेरी भिटामिन सी को उत्कृष्ट स्रोत हो, जसले पुरुषहरुमा शुक्राणुको संख्या बढाउँछ । साथै, यसले मुटु र धमनीहरूमा रक्त संचार सहज बनाउँछ । डार्क चकलेटमा डुबाइएको स्ट्रबेरी खाँदा, यसले यौन उत्तेजना पनि बढाउँछ ।
जिंक, सेलेनियम र भिटामिन ईको गुणहरूले भरीपूर्ण बदामले सेक्स बूस्टरको रूपमा कार्य गर्दछ । यस्मा भएको सेलेनियमले बांझोपनको समस्यालाई टाढा राख्छ, जिंकले सेक्स हार्मोन बढाउँछ र भिटामिन ईले मुटुलाई स्वस्थ राख्छ । मेमोरी बढाउनुका साथै दैनिक बदामको सेवनले यौन जीवनलाई स्वस्थ पनि बनाउँछ ।
खरबुजामा प्रशस्त मात्रामा फाइटोन्यूट्रिएन्टमा हुन्छ । जसले यौन उत्तेजना बढाउँछ । यसमा रहेको लाइकोपिन र बीटा क्यारोटीनले सेक्स ड्राइभलाई बढाउन मद्दत गर्दछ ।
पोटेशियम युक्त सखरखण्डले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउँछ, यसले पुरुषहरूलाई इरेक्टाइल डिसफंक्शनको जोखिमबाट बचाउँछ । बीटा क्यारोटीन र भिटामिन ए बाझोपनको समस्या पनि कम गर्छ ।
५. सेतो तिल
प्रशस्त मात्रामा जिंक भएको तिल उत्तम सेक्स बूस्टर फूड हो । यसले टेस्टोस्टेरोन र शुक्राणु उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ । एजेन्सीको सहयोगमा
किसबाट यसरी थाहा पाउनुहोस् प्रेमीको चाहना !
सेक्सको इच्छा नभए यसरी पार्टनरलाई खुशी बनाउनुस् !
केटीलाई इम्प्रेस पार्ने ५ तरिका ! « Mero LifeStyle